Global ကွန်ပျူတာသင်တန်း: ဓါတ်ပုံပြင်သော Program ၏ ယူနစ်များသတ်မှတ်ချက်များလေ့လာခြင်း
ဓါတ်ပုံပြင်သော Program ၏ ယူနစ်များသတ်မှတ်ချက်များလေ့လာခြင်း
Photoshop ပတ်ဝန် ကျင်ကောင်းများ အထူးလေ့လာခြင်း
Photoshop အထူးပြင်ဆင်ရန်အတွက် သင်အနေဖြင့် Program ၏သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ထားလိုက ထားနိုင်ပါတယ်၊ အများစု ပြင်ဆင်ချက်များဟာ နည်းပညာလှပသေသပ်စွာ ရွေးချယ်ခွင့်များပေးထားပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အခြေခံ ပြင်ဆင်နည်းနှစ်မျိုးကို အရင်ဖော်ပြပြီးနောက် ပိုင်းလေ့လာမှုများကို များစွာအထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်။
By default,adocument's dimensions are measured in inches. If you're not primarily editing images for prints, we recommend changing this setting to pixels.
သတ်မှတ်ချက်အရ စာရွက်များ၏ အတိုင်းယူနစ်များကို လက်မ ဖြင့်သာ တိုင်းတာဖော်ပြထားပါတယ် ၊ သင်အနေဖြင့် ဓါတ်ပုံပြင်တဲ့အခါ အဓိက စာရွက်ပေါ် ရိုက်နှိပ်ဖို့မရည်ရွယ်ထားဘူးဆိုရင် သင်ယူလေ့လာသူအား အကြံပြုလိုသည်က Pixels ယူနစ်ကို ပြောင်းသုံးဖို့ကို အကြံပြုလိုပါတယ်။
၁။ Edit မှ Preferences မှ Units & amp; Rulers ကို ရွေးပါ။ အကယ်လို့ Mac သမားဆိုရင် Photoshop မှ Preferences မှ Units&Rulers ကိုရွေးပါ။
Select Edit Preferences Units & Rulers. If you're usingaMac, select Photoshop Preferences Units & Rulers.
A dialog box will appear. Under Units, click the menu next to Rulers, select Pixels, and click OK. You may need to quit and restart Photoshop for the changes to take effect. ၂။ Units ဘောက်စ် ထွက်ပေါ်လာပါက Unit & Rulers မှ Units Rulers သတ်မှတ်ချက်နေရာတွင် Inches နေရာတွင် Pixel ကို ယူပါ။
Photoshop Program ၏သတ်မှတ်စာအရွယ်အစားပြင်လိုပါက Edit Preferences Interface (or Photoshop Preferences Interface onaMac). ၄င်းအတိုင်းသွားပါ။ Text ၏ UI Font Size နေရာတွင် မိမိထားလိုသော အရွယ်အစား ကိုသတ်မှတ်ပါ။ ပရိုဂရမ် ကို Restart ပြုလုပ်ပါ။
Posted by Zayyar Ting at 3:57 AM